Vakawanda vanotsvakurudza vanoita sevanopikisa maonero eI IRB. Kune rumwe rutivi, vanozviona sechigaro chekunyengera. Asi, panguva imwecheteyo, vanoonawo kuti ndiyo mhinduro yekupedzisira yezvisarudzo zvakanaka. Izvi zvinoreva kuti vazhinji vanotsvakurudza vanoita sevanotenda kuti kana IRB ichibvuma, saka inofanira kuva yakanaka. Kana tikabvuma kukwana kwechokwadi kweRBs sezvavaripo iye zvino-uye kune vakawanda vavo (Schrag 2010, 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -uye isu sevanotsvakurudza tinofanira kutora mamwe mabasa nekuda kwemitemo yekutsvakurudza kwedu. I IRB iri pasi kwete denga, uye iyi pfungwa ine zvinyanya zviviri zvinokosha.
Chokutanga, IRB iri pasi rinoreva kuti kana uri kushanda pane imwe nzvimbo inoda kubvunzurudzwa kweRBB, iwe unofanira kutevera mitemo iyoyo. Izvi zvingaita sezviri pachena, asi ndakacherechedza kuti vamwe vanhu vanoita sevanoda kudzivisa IRB. Zvechokwadi, kana iwe uri kushanda mune zvetsika zvisingawanikwi nzvimbo, IRB inogona kuva mushamwari ane simba. Kana iwe uchitevera mitemo yavo, ivo vanofanira kumira shure kwenyu kunofanira kuitika chimwe chinhu chisina kururama nekutsvakurudza kwenyu (King and Sands 2015) . Uye kana iwe usingateereri mitemo yavo, unogona kuguma uri woga mumamiriro ezvinhu akaoma.
Chechipiri, IRB haisi denga zvinoreva kuti kungozadza mafomu ako uye kutevera mitemo hakukwani. Mune mamiriro ezvinhu akawanda iwe semuongorori ndiiye anoziva zvakanyanya pamusoro pokuti ungaita sei tsika. Pakupedzisira, iwe uri mutsvakurudzi, uye mutemo wehutsika unogara newe; ndiro zita rako pamapepa.
Imwe nzira yekuvimbisa kuti iwe unobata IRB sepasi uye kwete denga ndeyekuisa marongerwo ezvinyorwa mune mapepa ako. Chaizvoizvo, iwe unogona kunyora maitiro ako ezvidzidzo zvisati zvaunotanga kudzidza, kuti uzvikumanire kufunga nezvekuti iwe uchatsanangurira sei basa rako kune vezera rako uye kuvanhu vose. Kana iwe ukazviwana usinganzwisisi paunenge uchinyorera maitiro ako ezvakanaka, ipapo kuongorora kwako hakugone kutora kukodzera kwakanaka kwetsika. Mukuwedzera pakukubatsira iwe kuongorora basa rako pachako, kubudisa maitiro ako ezvakanaka kuchabatsira boka rekutsvakurudza rikurukure nyaya dzezvemamiriro ehutano uye hugadzira mitemo yakakodzera inobva mumienzaniso kubva pakutsvakurudza kwechokwadi. tafura 6.3 zviitiko zvekutsvakurudza mapepa ayo ndinofunga kuti ane mazano akanaka emitemo yekutsvakurudza. Handibvumirani nezvose zvinotaurwa nevanyori mune zvekukurukurirana, asi iyo yose mienzaniso yevanotsvakurudza vanoita nekuvimbika nenzira inotsanangurwa Carter (1996) : pane imwe neimwe, (1) vatsvakurudzi vanosarudza zvavanofunga kuti zvakarurama uye chii chakaipa; (2) vanoita zvinoenderana nezvavakasarudza, kunyange pamitengo yavo; uye (3) vanoratidza pachena kuti vari kuita maererano nemaitiro avo ekuongorora mamiriro ezvinhu.
Tafura 6.3: Mapepa ane hurukuro dzinofadza dzeMitemo yekutsvakurudza kwavo
Rijt et al. (2014) Munda unoedza pasina kubvumirwa
Kudzivisa kukanganisa kwenyaya kunokuvadza
Paluck and Green (2009) Munda unoedza munyika iri kusimukira
Tsvakurudzo pamusoro pehurukuro
Nyaya dzinobvumirana dzakakwana
Kugadziriswa kwezvinogona kuitika
Burnett and Feamster (2015) Kutsvakurudza pasina kubvumirwa
Kuenzanisa nengozi nekubatsira apo njodzi dzakaoma kuverenga
Chaabane et al. (2014) Zvinoshandiswa mune zvemagariro ekutsvakurudza
Kushandisa mafaira akaiswa data
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) Munda unoedza pasina kubvumirwa
Soeller et al. (2016) Mitemo yakasvibiswa yebasa